तरकारी तथा फलफुल बजार अनुगमन: राम्रो र सडेको तरकारी एकै ठाँउमा , मुल्य सुचि खोई ? « Tulsipur Khabar
तरकारी तथा फलफुल बजार अनुगमन: राम्रो र सडेको तरकारी एकै ठाँउमा , मुल्य सुचि खोई ?
बसन्त परियार,तुलसीपुर,४ चैत ।
तुलसीपुरको ब्यवस्थीत तरकारी तथा फलफुल बजारमा सञ्चालीत कुनै पनि पसलले मुल्य सुचि टास गरेका छैनन । यसका साथै अधिंकाश पसलहरु नविकरण विना सञ्चालन भएका छन । उनिहरुले उपमहानगरमा हरेक बर्ष नविकरण गर्नुपर्ने भएतापनि यस बर्ष नविकरण नगरेको पाईएको छ ।
उपमहानगर अन्र्तगत उपभोत्ता हित संरक्षण मञ्चले गरेको अनुगमनका क्रममा यस्तो पाईएको हो । तरकारी तथा फलफुल बजार ब्यवस्थित गर्नका लागि बनाईएको समितिका अध्यक्ष देवराज देवकोटाले समेत नविकरण नगरी ब्यवसाय सञ्चालन गरेको पाईएको छ । उनि जस्तै धेरै पसलले नविकरण गरेका छैनन । त्यस क्रममा अव छिट्टै नै मुल्य सुचि टास गर्ने एन.के.तरकारी पसलका सञ्चालक नारायण केसीले बताएका थिए ।
मुल्य सुचि हुदा ब्यवसायीहरुले फरक फरक मुल्यमा तरकारी बेच्ने गरेको समेत पाईएको थियो । केहि पसलमा सडे गलेको तरकारी तथा फलफुल एकै ठाउमा भेटिएको थियो । यस्ले गर्दा उपभोत्ता ठगिने गरेको ईलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुरका शाखा अधिकृत श्रीधर टण्डनले बताए । कारवाही नगर्दा सम्म यसमा सुधार हुदैन् अधिकृत टण्डनले भने । पसलहरुको अटेरीले गर्दा सुधार हुन नसकेको उनले बताएका थिए । पसलहरुमा तरकारी तथा फलफुलको ग्रेडिङ समेत नगरिएको कृषि शाखाका प्रमुख धनराज गौतमले बताए । सबैको एउटै ग्रेडिङ हुदा उपभोत्ता ठगिने उनले बताए ।
ब्यवसायीले प्रयोग गर्ने काटा नापतौल विभागले नजाचेको, कर चुक्ता प्रमाण पत्र नभएको तथा नविकरण नगरेका पाईएको थियो । अनुगमन टोलीलाई ब्यवसायीले घरमै राखेको भन्दै टारेका थिए । कति पसलले भने ल्याउन भ्याएका थिए । ब्यवसायीले गरेका यी कमजोरी आगामि दिनमा सच्याउनुपर्ने तुलसीपुर उद्योग बाणिज्य संघका बाणिज्य उपाध्यक्ष मिनराज भण्डारी बताउहुन्छ । यसका लागि संघले आवस्यक परे सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताएका थिए ।
ब्यवसायीहरुले भने उपमहानगरको फोहर उठाउने गाडी समयमा नआउदा समस्या भएको अवगत गराएका थिए । धेरै फोहर निस्कने ठाँउमा गाडी दैनिक जसो आउनुपर्न घिमिरे सप्लार्यका सञ्चालक माधव घिमिरले बताए ।
मुल्य सुचि नटास्दा किसान र उपभोक्ता ठगिने गरेको हुदा तीन दिन भित्र मुल्य सुचि टास नगरे कारवाही गर्ने उपभोत्ता हित संरक्षण मञ्चका प्रमुख रेवा रावतले बताईन । आगामि दिनमा पनि सुधार नभए उपभोत्ता अधिकार ऐन अन्र्तगत कारवाही गरिने उनले बताईन । अनुगमनका क्रममा मानव अधिकार सञ्जाल दाङका संयोजक केशव कुमार शर्मा, पत्रकार बसन्त परियार लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।